.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flower Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၂
Flower Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၂
ကဲ Flash Effect အသစ်လေးတွေ သုံးချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီနေ့ Flower Flash Effect လေးတွေ ထပ်ပြီး
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Flash Song ဝါသနာရှင်တွေအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါက
Effect တွေကို ၅၁ ကနေ ၁၀၀ အထိ Google Drive ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကို စုပြီး တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလုပ်မပေးတာက ကြည့်ပြီးမှ ဒေါင်းချင်တဲ့သူတွေ ရှိတာရယ်၊ နောက်ပြီး
လွယ်လွယ်နဲ့ ရသွားတော့ တန်ဖိုးမထားကြမှာစိုးလို့ပါ။ တကယ်လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ဒီ Effect လေးတွေကို
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဒေါင်းယူကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြပါ။
Download: Flower Flash Effect များ ဒေါင်းရန် ၂
Flower Flash Effect စုစုပေါင်း ၅၀ ကို နံပါတ် ၅၁ ကနေ ၁၀၀ အထိ Google Drive က တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြည့်မယ်ဆိုရင် Flash ဖိုင် နံပါတ် ပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး Open Link in New Tab ကို နှိပ်ပါ။ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့
Flash ဖိုင် နံပါတ် ပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး Save Link As... ကို နှိပ်လိုက်ပါရန်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ..
ဒီ Flash Effect လေးတွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လင့်လေးကို ပို့စ်ရဲ့
တစ်နေရာရာမှာ ထည့်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း Flower Flash Effect အသစ်တွေ ကို
ထပ်တင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 08:49